वर्तमान सत्ता र जनजागरणबारे – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७४, १२ माघ शुक्रबार १२:३४ October 19, 2020 1130 Views
कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अन्र्तगत भर्खर चुनाव सम्पन्न भएको छ र कथित बाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको छ । शाषक वर्गले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको लामो वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित नयाँ राज्यसत्ता भएकोले यसले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि दिने दावी गरिरहेका छन् भने बामगठबन्धनले त अब समाजवाद आउने वा ल्याउन सकिने तर्क पनि गरेको छ । तर एकातिर जनताको जीवनमा “नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी” वा “जो आएपनि कानै चिरेका” भन्ने भनाइको अनुभूति गराएको छ, भने अर्कोतिर नेकपाले यो सारतः पुरानै असफल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था भएकोले यसलाई अस्विकार गरेर विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थालाई तर्क अगाडि सारेको छ । यसरी हाम्रो देश नेपाल राजनैतिक रूपमा दुई धु्रवमा विभाजित हुन पुगेको छ भने जनता भ्रम र अन्यौलतामा बाँचेका छन । त्यसैले वतर्मान राज्यको यर्थाथ र सही विकल्प बारे जागरण अभियान आवश्यक भएको छ । यहाँ यही विषयमा सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
पहिलो, राज्यको स्वतन्त्र राष्ट्रिय नीति—अहिलेको राज्यसँग यो राष्ट्रिय नीति नै छैन । किनकि हाम्रो देश पूर्णतः स्वतन्त्र भइसकेको छैन । तथ्यमा हेर्दा यो कथित नयाँ राज्यले पनि विगतका असमान सन्धी सम्झौताहरू खारेज गर्न सकेको छैन । खुला सीमानाको समस्या, सीमा अतिक्रमणको समस्या कायमै छ—जो भर्खरै वीरगंजमा ५० बिगा नेपाली जमिन अतिक्रमणमा देखिएको छ । संसदीय राजनैतिक पार्टीका प्रायःमुल नेतृत्वमा राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवादको समस्या देखा परेको छ । परिणामतः संविधानतः देश सार्वभौम र स्वतन्त्र भनिएपनि बस्तुतः देश अर्धऔपनिवेशिकताबाट नवउपनिवेश बनेको छ । आजको विश्वमा विकसित आणविक शक्तिसम्पन्न देशहरूले पनि आफ्नो संकटलाई टार्न कथित राष्ट्रवादको नारा दिइरहेका छन् । यद्यपी यी देशहरूले दिएको राष्ट्रवादको नारा अन्धराष्ट्रवादको नारा हो र वास्तविक रूपमा यो पुँजीवादी फासिवादी नारा हो । आफ्नो संकटलाई टार्न भएपनि शक्तिसम्पन्न देशले त राष्ट्रवादको नारा दिरहेको छन् भने हाम्रो जस्तो अविकसित तेस्रो विश्वको देशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता बिना कसरी शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि हुन्छ ? जब कुनै देश आफै स्वतन्त्र हुदैन भनें त्यो देशमा कसरी समृद्ध हुन्छ । त्यसैले जुन राज्यसँग आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रिय नीति नै छैन भने त्यो राज्यसत्ता कसरी राष्ट्रिय हितमा हुन्छ ?
दोस्रो, राज्यको अर्थनीति हो । अहिलेको राज्यले अवलम्वन गरेको अर्थनीति विगत राज्यसत्ताकै अर्थनीतिको निरन्तरताको नीति हो । यो अर्थनीति उत्तरसाम्राज्यवादी निगम पुँजीवादको अधिनस्थ रहेको छ वा त्योद्वारा निर्देशित छ । यो अर्थनीति नीजिकरण र व्यपारीकरणको नवउदारवादी अर्थनीति हो । यो अर्थनीति विश्व बैंक र व्यापार संगठनद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । यो गैरसरकारी संस्थाद्वारा धेरै हदसम्म प्रभावित हुन्छ । यसलाई हामीले दलाल पुँजीवादी अर्थनीति भन्छौ भने, पुँजीवादी स्वंयले पनि असाध्य पुँजीवाद भन्ने गरेका छन् । यही दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिको व्यावहारिक परिणाम यो हो कि देश एकपछि अर्को परनिर्भर र कंगाल बन्दै गएको छ । कमिसन र भ्रस्टाचार वैधानिक र संस्थागत भएको छ । वेरोजगारी र युवा पलायनतामा तिव्र बृद्धि भएको छ । प्रत्येक नेपालीहरूको थाप्लोमा २२ हजार विदेशी ऋण थोपरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य धेरै महंगो बन्दै गएको छ । यो आधारभूत कुरा पनि सामान्य जनतालाई काल झै बनेर पछ्याइरहेको छ । हामीले यो दलाल पुँजीको सरल रूप काठमाण्डौंको कालीमाटीको तरकारीमा देख्न सक्छौ । जहाँ गाँउबाट आफ्नै बाबा(कृषक)ले मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी २० रूपैयामा बेच्छ र कालीमाटीमा पुगेपछि कलेज पढ्न आएको छोरा(उपभोक्ता)ले १५० रूपैयामा किनेर खान्छ । यसरी वास्तविक श्रमिक जनता ठगिन्छ र बिचौलीयाले दलाल पुँजीको वृद्धि गर्छ । यिनै विचौलीयाकमिसनखोर, माफियाहरू र दलाल पुँजीपतिको संजाल नेपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा व्याप्त रहेको छ । त्यस्तै हामी दलाल पुँजीको जटिल रूप नेताहरूको चुनावी खर्चमा देख्न सक्छौ । अहिले नेताहरूले पेश गरेको चुनावी खर्च लाखको अनुपातमा छ । प्रचण्डले त साँढे नौ लाखको चुनावी खर्च विवरण पेश गरेर दिउँसै रात पारेका छन् । तर वास्तविक खर्च करोडौंमा छ र त्यो संस्थागत नभएको, बैंकिङ्ग रेर्कड नभएको, नदेखिएको र देखाउन नमिल्ने दलाल पुँजी (थैला पुँजी) हो । वास्तवमा दलाल पुँजी भनेको अनुत्पादक पुँजी हो । यसको लगानी दलालहरूको उत्पादनमा हुन्छ । यसको उर्वर भूमि हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका अविकसित देश हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा संसदीय राजनैतिक पार्टीहरूले दिएको कथित “आर्थिक क्रान्ति” को नारा यही दलाल पुँजीपति वर्गको नारा हो । अब यो दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिलाई अवलम्वन गरिरहेको राज्य कसरी जनहितको राज्य हुन्छ ?
जनजागरण अभियानको तेस्रो कार्यभार भनेको वर्गसंघर्षलाई जारी राख्दै एकिकृत जनक्रान्तिलाई निरन्तरता दिनु हो । जस अन्र्तगत राष्ट्रियता र भ्रष्टचार विरुद्धको संघर्षलाई अगाडी वढाउने हो । जनतन्त्र र जनजिविकाका सवाललाई लीएर संघर्ष गर्ने हो जसअन्र्तगत राष्ट्र लुट्नेको पहिचान गर्दै क्रमश जनतालाई संघर्षमा उत्रीन अपिल गर्ने,महङ्गी विरुद्ध संघर्ष गर्ने, कम्युनिष्टको अन्त्य गर्न जन्माइएका गैर सरकारी संस्था विरुद्ध संघर्ष उठान गरीनेछ र पार्टी विरोधि अपराधिक तत्वलाई सर्तक वनाउने साथै,पुरानो सत्ताका तथाकथित जनप्रतिनिधि विरुद्धको संघर्ष पनि अघि वढाउदै लीने कार्यभार हो ।
अन्त्यमा, नेपालमा दलाल पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवाद, राष्ट्रिय आत्मसमर्पण र स्वाभिमान, आम्ने साम्ने हुदै प्रतिक्रान्ति र क्रान्तिको टक्करको प्रकृया नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रत्यक नेपालीले सोच्न जरुरी छ कि कथित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक वर्तमान राज्यले मुक्ति,परिवर्तन र संम्वृद्धिको सरल मार्ग प्रस्तुत गर्दै थप संकट ल्याएर आउदैछ त्यसैले यो संकटको सहि समाधान एकिकृत जनक्रान्तिको सम्पन्नता र राष्ट्रिय स्वाधिनतासहितको वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हो यहि सत्यलाई जनतामा पुर्याउन जनजागरण अभियान निरन्तर चलाइनुपर्ने हुन्छ र चल्दै जानेछ । स्रोतः रातो खबर साप्ताहिक, वर्ष ३, अङ्क ३२, पूर्णाङ्क १२७
२०७४ माघ १२ गते अपरान्ह ६ः१९ मा प्रकाशित